Ka dib marka dhagaxa 'gypsum rock' lagu quudiyo nidaamka burburaya si loo helo cabbir ah 3 - 4cm dhagax, oo kor loo qaado silo ka hor inta aan la dubin, ka dib marka la cabiro, dhagaxyada waxaa lagu quudiyaa qashin diir ah oo loogu talagalay calcination. Dhexdhexaadiyaha kuleylku waa fooq kulul, oo dhuuntiisu ku faafto bartamaha iyo darbiga kilkilaha, halka kilkiilku wareegayo, dhagaxa 'gypsum rock' ayaa si siman loogu kululeyn karaa si loo calcinay. Dhagaxyada loo yaqaan 'Calcned' waxaa lagu quudiyaa silo si ay gabow ugu noqdaan kadibna loogu gudbiyo mashiinka wax shiidaya si ay u noqdaan budo Ka dib budada 'gypsum' waxaa loo gudbiyaa silo wax soo saar si ay ugu ridaan bacaha kala duwan mashiinka wax lagu xiro.
Ka dib marka dhagaxa 'gypsum rock' lagu quudiyo nidaamka burburaya si loo helo cabbir ah 1 - 4cm dhagax oo dhagax ah, kaas oo lagu quudinayo shiida mashiinka si loo helo budada gypsum budada / stucco, waxaana loo sii gudbiyaa wiishka baaldi ilaa silo deggan, ka dib marka si toos ah oo sax ah loo cabiro, foornada calcination Iyada oo leh kuleyl badan oo ka yimaada kuleylka hawo kulul ama kuleeliyaha, budada ceyriin ee budada ah waxay noqoneysaa budada loo yaqaan 'gypsum budada'. Ka dib qaboojinta ama gabowga, sheyga la dhammeeyey waxaa lagu buuxiyaa boorsooyin kala duwan mashiinka wax lagu duubo.
1. Heerka tayada budada Gypsum: iyadoo la raacayo GB / T 9776-2008
2. Teknolojiyada weyn (halkan u soo qaad Nature gypsum rock tusaale ahaan)
Gypsum rock - markii ugu horeysay ee la burburiyo - mar labaad oo la jajabiyo - shiidi - calcining - badeecooyin gaboobay (gypsum stucco / powder)-xirxirida
Mashiinka Gypsum ee Khadadka Samaynta Paris
Dhagaxa gypsum ee cabirka 1 - 4cm dhagax ayaa kor loogu qaadayaa wiishka baaldi lagu galiyay silos gypsum rock silos, ka dib waxaa lagu quudinayaa in la shiido mills si loo helo budada gypsum budada / stucco cayriin, ka dib waxaa loo gudbiyaa wiishka baaldi ilaa silo deggan, ka dib markii si sax ah loo qiyaaso miisaanka suunka nidaam leh PLC oo la kontoroolo, ka dibna waxaa lagu quudiyaa qashin lagu shido. Iyada oo leh kuleyl badan oo ka yimaada kuleylka hawo kulul ama kuleeliyaha, budada ceelasha ceyriinka ah waxay noqoneysaa budada loo yaqaan 'calpsed gypsum budada ah ee foornada lagu shido. Ka dib qaboojinta ama gabowga, sheyga la dhammeeyey waxaa lagu buuxiyaa boorsooyin kala duwan mashiinka wax lagu duubo.